Otu esi etinye ihe nchọgharị Brave na Debian 11 - LinuxCapable
Otu esi etinye Brave Browser na Debian 11
Tọzdee, Septemba 9, 2021 Tuesday, August 24, 2021 by Jọshụa James
Wụnye igodo GPG na Repo na Debian 11
Bubata igodo GPG Brave
Bubata ma tinye ebe nchekwa obi ike
Wụnye Brave na Debian 11
Gbaa Brave Browser na Debian 11
Na-emelite ihe nchọgharị Brave na Debian 11
Wepu Brave Browser na Debian 11
Nwere Obi Ike bụ ihe nchọgharị weebụ efu na nke mepere emepe mebere Software Nwere Obi Ike, Inc. dabere na ihe nchọgharị weebụ Chromium. Brave bụ ihe nchọgharị ịntanetị lekwasịrị anya nzuzo, nke na-ekewa onwe ya na ihe nchọgharị ndị ọzọ site na igbochi mgbasa ozi ịntanetị na ndị na-achọpụta weebụsaịtị na ntọala ndabara ya ozugbo. Brave ekwuola na ihe nchọgharị ya na-etinye obere nsogbu na arụmọrụ kọmputa gị karịa Google Chrome n'agbanyeghị ole ị na-arịọ ya. Ọbụlagodi na ọtụtụ taabụ mepere otu oge, Brave na-eji obere ebe nchekwa karịa Google Chrome dị ka, ruo 66% obere.
N'ime nkuzi a, ị ga-amụta Otu esi etinye Brave Browser na Debian 11.
Ngwungwu achọrọ: wget ma ọ bụ curl
Ọzọ, wụnye ndabere ndị a chọrọ maka nrụnye:
Mara, mee iwu ahụ ma ọ bụrụ na ịmaghị n'aka na ọ gaghị emerụ gị ahụ ma ọ bụrụ na ị tinyela ngwugwu ndị a.
Na nzọụkwụ mbụ, ị ga-mkpa ibudata igodo GPG ma ọ bụ echichi gị nke Brave ka ọ gbajie ka ọ dị mkpa iji nyochaa ma isi iyi ahụ bụ ezigbo.
Enwere ike itinye Brave Browser ugbu a site na iji ihe ndị a.
Ugbu a tinye Brave na iwu a:
Ihe atụ n'okpuru:
Kwado ụdị ahụ wee wuo ụdị Brave Browser arụnyere na sistemụ arụmọrụ Debian gị site na iji iwu a:
Brave Browser 92.1.28.106
Na echichi zuru ezu, ị nwere ike na-agba ọsọ obi ike na a ole na ole ụzọ dị iche iche. Nke mbụ, mgbe ịnọ na ọdụ Debian gị, ị nwere ike iji iwu a:
N'aka nke ọzọ, gbaa ọsọ iwu ihe nchọgharị nwere obi ike n'azụ ka ịtọhapụ ọnụ ọnụ:
Agbanyeghị, nke a adịghị mma, ma ị ga-eji ụzọ ndị a na desktọpụ Debian gị meghee ụzọ ahụ: Ihe omume > Gosi ngwa > Ihe nchọgharị webụ nwere obi ike. Ọ bụrụ na ịnweghị ike ịhụ ya, jiri ọrụ ọchụchọ dị na menu Gosi Ngwa ma ọ bụrụ na etinyere ọtụtụ ngwa.
The oge mbụ ị meghere Obi ike, mmapụta a ga-ekele gị:
Ugbu a ị ga-ahụ Brave Internet Browser n'ikpeazụ dị ka n'okpuru:
Ka imelite Brave Browser, gbanye ya APT melite iwu na ọdụ gị ka ị ga-elele sistemụ gị niile maka mmelite ọ bụla.
Iji wepu Brave na Debian 11, mebie iwu njedebe ndị a:
sudo apt autoremove brave-browser
N'ime nkuzi a, ị mụtala ka esi ebubata ebe nchekwa Brave n'ime ndepụta isi mmalite ma tinye ihe nchọgharị weebụ. N'ozuzu, Brave bụ ihe ọhụrụ na-adọrọ mmasị na ebe ihe nchọgharị weebụ. A ga-ekwere nkwudo Brave banyere ịdị ngwa karịa Google Chrome dịka site na iwepu mgbasa ozi na ndị na-eso ụzọ mgbasa ozi na ndabara, Brave na-ebudata ọdịnaya dị obere na weebụsaịtị karịa ihe nchọgharị ọ bụla ọzọ.
Otu esi etinye Brave Browser na openSUSE Leap 15
Otu esi etinye Brave Browser Stable, Beta, ma ọ bụ…
Otu esi etinye Brave Browser na CentOS 8 Stream
Wụnye Brave Browser na Linux Mint 20.0/20.1/20.2/20.3
Wụnye Brave Browser na OS elementrị 6.0/6.1
Categories Debian Tags Nchọgharị Obi Ike, Nnenna 11 Bullseye Mail igodo
Otu esi etinye MySQL 8 kacha ọhụrụ na Debian 11
Otu esi etinye Fail2ban na Firewalld na Rocky Linux 8
Satọde, Ọgọstụ 28, 2021 6:51 ehihie
sudo apt-key adv –keyserver keyserver.ubuntu.com –recv-keys A8580BDC82D3DC6C
Tọzdee, Septemba 9, 2021 12:11 ehihie
(…) sudo apt-key –keyring (…) bụ iwu ewepụrụ, dị ka mmadụ apt-key (!)
Tọzdee, Septemba 9, 2021 12:13 ehihie
N'ozuzu, anabata akụkọ gị
Tọzdee, Septemba 9, 2021 6:57 ehihie
Daalụ, emelitere ntuziaka.
Fraịde, Septemba 10, 2021 11:40 ehihie
Agbalịrị m iwu ndị a ( sorokwa usoro ndị dị na ibe nbudata Brave maka Debian 9+. Ọ na-ekwu mgbe niile "E: Enweghị ike ịchọta ngwugwu obi ike- nchọgharị"
Fraịde, Ọktoba 1, 2021 6:05 nke abalị
Ndo maka ozi egbu oge agbaghara. Ị na-amalite site na ọdụ ụgbọ elu? Akara ngosi a na-efu na menu ngwa? Nke a bụ Debian 11; ị na-etinye Brave na?
Agbalịrị m nke a ugboro ole na ole na nrụnye kacha ọhụrụ Debian 11. Igwe gị ọ bụ nkwalite site na iri? Enwere mperi ọzọ ma ọlị?